Isitifiketi Esiphelele Sokwehla Okuzenzakalelayo kweBelay | Izinhlelo Zokukhuphuka Eziphelele Eziphelele
I-Perfect Descent Auto Belays iqinisekiswe ku-10X EN 341: 2011 Class A
Mayelana nama-EN Standards we-Auto Belays
Amazinga we-EN abeka umgoqo wokuphepha komkhiqizo, ukwethembeka, kanye nekhwalithi emhlabeni jikelele. Yonke imodeli ye-Perfect Descent engu-230 i-Auto Belays enosuku lokwenziwa kukaJulayi 2020 futhi kamuva iqinisekiswe izikhathi eziyishumi EN 341: 2011 Class A njengoba iqondiswe yi-RFU PPE-R / 11.128 Version 1. Lawa mazinga avumelanisiwe aseYurophu amele izidingo zokuhlola eziphelele kakhulu ama-auto belays ezentengiselwano asetshenziswa ekukhuphukeni kwama-gyms nemisebenzi efanayo yokuqwala mpo.
Ama-auto belays ajwayelekile futhi asetshenziswa kaningi kunakuqala, futhi iziqondiso ze-Personal Protective Equipment (PPE) e-European Union zivale izikhala ezibalulekile ezihambisana nokuhlolwa nokuqinisekiswa kwamadivayisi we-auto belay. I-RFU PPE-R / 11.128 Version 1 incoma ukuthi amaLabhoratri Wokuhlola Ahlonishwayo Kuzwelonke (ama-NRTLs) abhekele ukwenza ukuhlolwa kwezitifiketi ze-EN, asebenzise izidingo ze-EN 341: 2011 Class A, ephindaphindwe kaningi ukwenziwa kwamandla okwehla, okwehlisa amadivayisi asetshenziswa ekukhuphukeni kwamajimu , kwizifundo zezintambo, nakuzinhlelo ezifanayo zokuzithokozisa.
I-European Union iqoka izinhlangano ezithile, ezibizwa nge-Notified Bodies, ukuthi zihlole ukuhambisana kwemikhiqizo ethile edayiswa emazweni e-EU. I-European Coordination of Notified Bodies emkhakheni we-PPE yisithangami sokudingida imibuzo ephathelene nokuqinisekiswa kwe-PPE futhi kulapho amaqembu asebenzayo ehumusha izinqubo zokuhlola nezindlela zokulawula ikhwalithi ezinhlobonhlobo zezinto zokuzivikela ezibandakanya ama-auto belays. Izincomo Zokusetshenziswa (ama-RFUs) zikhishwa kulawa maqembu asebenzayo ukuthi zisetshenziswe yizo zonke izinhlaka ezazisiwe ekunikezelweni kwemikhiqizo esebenzayo. I-European Test Center Group ye-PPE emelene nokuwa kusuka ekuphakameni (I-Vertical Group 11) ikhiphe i-RFU PPE-R / 11.128 Version 1 eqaphela ukuthi amabhande wemoto asetshenziswa ngokuqhubekayo kuzindawo zokuzithokozisa kufanele ahlolwe ngokungafani nezicelo zokuvikela ukuwa kwezimboni, okuyi-EN standard ikheli ngqo.
Umehluko Phakathi Kokwehla Okuphelele Kwekilasi A Nemishini Yesigaba C
I-Perfect Descent Auto Belays enosuku lokukhiqiza lukaJuni 2020 nangaphambilini iqinisekiswe ngaphansi kwe-EN 341: 2011 Class C. Ngakho-ke, yini umehluko phakathi kwamadivayisi we-Perfect Descent Class A no-Class C? Ngamafuphi, hhayi okuningi. Zombili zakhelwe ukucaciswa okufanayo futhi zinomklamo ofanayo omusha nezinto zekhwalithi ephezulu. Ngokusebenzayo, wonke ama-Perfect Descent Auto Belays athengiswe kusukela ngo-2012 acishe afane, noma ngabe aqinisekisiwe nge-Class A noma C. Umehluko oyinhloko phakathi kwalezi zingxenye yilebuli yomkhiqizo etholakala ohlangothini nangemuva kweyunithi kanye nesikhathi esibekiwe esivunyelwe sokuphinda kwenziwe kabusha. Uchwepheshe ogunyaziwe womkhiqizi kufanele aqedele ukuphindwaphindwa kwesikhashana kwamadivayisi we-Class A okungenani kanye ezinyangeni eziyi-12, ngenkathi amadivayisi e-Class C kufanele aqiniswe okungenani kanye ezinyangeni ezingama-24.
Onke amadivayisi we-Class A athengiswa nge-Duplex Spring Design yethu ekhethekile eneziphethu ezimbili ezizimele zokudonsa ezivumela imisila yenkomo ukuthi iqhubeke nokuhoxa lapho kwenzeka ukuphuka kwentwasahlobo. Amadivayisi amaningi weClass C asevele afaka iDuplex Spring Design, futhi amayunithi amadala entwasahlobo eyodwa azobuyekezwa ngensizakalo elandelayo ngaphandle kwezindleko ezengeziwe.
Ingabe i-Perfect Descent Class C Auto Belays Ngaphansi Kuphephe?
Cha. I-Perfect Descent Auto Belays ibilokhu yakhelwe njalo ngokuphepha kwabasebenzisi bokugcina. Amazinga we-EN asungula ukucaciswa okuncane kokuhlolwa nokuhlolwa kwemikhiqizo ethile futhi kwehlukile kunhloso yomkhiqizi kanye namabhentshimakhi wokusebenza. I-Perfect Descent Class C Auto Belays ifaka umklamo ofanayo omusha kanye nezinto ezisezingeni eliphakeme njengamadivayisi wethu aqinisekisiwe weClass A.
Njenganoma iyiphi idivayisi ebaluleke kakhulu empilweni, kubalulekile ukuthi ama-opharetha alandele izidingo zomkhiqizi zokuhlolwa ngezikhathi ezithile nokwenziwa kabusha, asuse noma iyiphi iyunithi kusuka kwisevisi esebenza ngaphandle kwemikhawulo ejwayelekile. Njengenjwayelo, isikhathi esibekiwe sokuphinda kwenziwe isitifiketi sedivayisi yakho sithathwa njengesibalo esiphezulu sesikhathi okufanele siphele ngaphambi kokuthi iyunithi ihlolwe nguchwepheshe ogunyaziwe. Amayunithi anevolumu ephezulu yokusetshenziswa, lawo asetshenziselwa ukukhuphuka komncintiswano, namayunithi asetshenziswa ezindaweni ezinzima angadinga isevisi ejwayelekile noma ukuphinda kwenziwe kabusha.
Ngisengakwazi Ukuthenga Amadivayisi Weklasi C?
Imodeli yamanje I-Perfect Descent Auto Belays ithengiswa ngesitifiketi se-Class A kuphela. Uma njengamanje ungumnikazi wedivayisi yeClass C, ungakhetha ukuthuthukela idivayisi iye ku-Class A ekuphindaphindweni okulandelayo ngemali ekhokhwayo, noma ungaqhubeka ukuphinda uthi idivayisi njenge-Class C okungenani kanye ezinyangeni ezingama-24. Ngeshwa, imodeli endala ye-220 CR belays ayikwazi ukubuyekezelwa isitifiketi se-Class A. Xhumana nomthengisi wakho oseduze noma isikhungo sesevisi mayelana nezinketho zokuhweba.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana nokuphinda kwenziwe kabusha kwe-auto belay.
Chofoza lapha weSimemezelo Sokuvumelana kanye neSitifiketi Sokuhlola sohlobo lwe-EU.